ICO обзор – #FanChain by SportsCastr🚀
Vadikanwi shamwari, ini ndinogamuchira munhu wose pa blog yangu! Nhasi ini ndichakuudza pamusoro peCIO inofadza zvikuru. Tichakurukura kuti FanChain inoshandisa sei magetsi e-blockchain mumutambo wemitambo yekutambira, uye tichazotaurirawo zvakadzama pamusoro pemashoko eI ICO.
Purogiramu yemuP FanChain ndiyo kusikwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvemitambo yemitambo yemitambo inowanikwa mumitemo yekugadzirisa hurumende. Nokuda kwekuendeswa kwekukurumidza kweprojekti, zvirongwa zvakawanda zvekukurudzira zvakaiswa. FanChain inzvimbo yevashandi vemitambo, yakasikwa pamitemo yekugadzirisa masimba. Anonzwisisa kurota kwekare kwevataridzi vakawanda-kuwana mari yekuzvivaraidza, kudzidza nezvemutambo wake wemutambo. Muchikamu chepuratifomu pane 4 zvikamu zvinokosha:
Purse FanWallet ye cryptographic currency.
Mint (apa tichaita zviratidzo zvakasiyana-siyana zvine dhiyabhorosi data – zviratidzo zvemakwikwi, maqembu uye leagues).
Sangano rekubhadhara FanPay rinoshanda sei?
Chokutanga pane zvose, mushandisi anoda kuumba purogiramu yeboka mumutambo (zvichida mumakwikwi kana muchibvumirano).
Kuti uwane rumwe ruzivo pamusoro peprojekti, mutengi anoda kutenga zviratidzo zveFanChain, umo ruzivo ruchachengetwa (aya mari inonzi “marisi”).
Zvadaro, chikwama chemutengesi chichati chienzanise uye chikamu chemufananidzo wemari.
Muridzi wemari yacho achakwanisa kupa mubairo mharaunda yavo.
💥 Vatengi vemashikiti muhuwandu vanowana mabhonasi uye zvidzidzo pamiti yakasiyana-siyana uye mamwe mabasa. Nokudaro, urongwa hunotipa mikana yakasiyana yekusimudzirwa kwezvikwata: vatenzi vemakambani emitambo vanogona kuumba ma FanChain avo mazita ane chiratidzo chechikwata. Vatsigiri vanogona kutenga matikiti emitambo yemakambani emagetsi akadai nekanyanya kuderedza.
Mukati mehutano hweprojekti, mitsva mitatu yekutsigira yakatangwa:
Affiliate campaign. Iyo kambani yakazivisa kuti mumakore matatu mushure mekupera kwekutengeswa kwevanhu vose, ichagovera chegumi chemari kune vashandi.
Public campaign. Vose vanobata zviratidzo vachawana mubairo zuva rega rega (zvichienderana nebasa).
Bounty. Mukuwedzera, iyo purojekiti yakaisa mari yakawanda yenhamba yezvikwereti zvekubhadhara chikwereti (3% yenhamba yese yemari).
💥Hamudi kuti uve mu studio zvakare kuti uone sechiremba. Ndinotenda kuvhidhiyo yakagadzirwa zvigadziriswa, nguva yekupedzisira yakasimba, SportsCastr ichaita sokunge uri paTV, pasinei nokuti uri kupi. Uyezve, zvinhu zvose muScotCastr zvinogona kutsinhaniswa uye zvichishandiswa, izvo zvichaita kuti vataridzi vataure newe uye kuparidzirwa kwako nenzira dzisina kumboitika.
Nechokushandisa kwayo iPhone uye nehuwandu hwehutachiona hwehutano, SportsCastr nguva dzose inosvika …. SportsCastr ndiyo chete yechokwadi-nguva yevhidhiyo yepurogiramu inobvumira vataridzi kuti vatarise hupenyu hwehupenyu pane chero chipangizo cheseferesi pasina chidimbu chekushanda. Paunenge wakagadzirira kubuda, unongotora chikoro kana kuti uchitungamirire zvakananga pamutambo wako wepakombiyuta kana pakombiyuta.
Tsvaga vashambadziri vanobva kumativi ose enyika uye tevera hupenyu hwako hunodiwa kuitira kuti usambosvikirwa nekuvandudzwa. Kana vako vaunofarira vachienda, SportsCastr ichakurumidza kutumira iwe chinyorwa chinokubvumira kutarisa nemumwe waro. Haikwanisi kutarisa kuparidzirwa kwehupenyu? Enda kushanho remutambo panguva ipi zvayo kuti uwane chiito.
Mitambo inofadza zvikuru kana iri yehutano. Unganidza nevamwe vataridzi vanogadzwa uye vagare muhurukuro nemushambadziri. Hazvina mhosva kuti uripi, iwe hauchazove uri muimba imwechete kuti unakidzwe nemutambo pamwe chete nevafanana sezvaunoita.
FanChain anotipa urongwa umo mitambo richikomborerwa zviratidzo, vari kuita, uye pave inofambiswa loop kuti kunomutsa munharaunda kuita munzanga Kukurukurirana vanotovimba iyo, nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri mitambo ruzivo. FanChain anotanga pfungwa «Mints», iyo vakapakata DApp uye anobvumira mapati wechitatu kugova zviratidzo FanChain, izvo anozivikanwa chaizvo mitambo chikwata, sungano kana chiitiko
Vose vashandisi veScartCastr platform vachasangana nechinhu chiri nyore kushandisa uye chakachengeteka kwazvo FanWallet interface. Wallet achibvumira vanoishandisa kutumira nokugamuchira zviratidzo FanChain, exchange chiratidzo FanChain muna Tix uye arambe yavanowana uye-App kutenga. Nhanho I yehupfumi hwezvinhu zveMedia SportsCastr ichabvumira vataridzi kupa mubairo mazai nedijititi mazano nenzira yeEmedian neyemagetsi emagetsi. Vafanani vanogona kushandisa ichi chinhu chinonzi digital kuti vaedze vashandisi vavo vanofarira kuburikidza nekuparidzirwa, vagamuchira mhinduro mukudzoka. Vanoiona uyo kutumira inonyanya kukosha digitaalinen zvinhu zviri chepamusoro ari kureva matare mafeni zvakazivikanwa uye akagamuchira kuteerera nokuda vayo shinda (ndiro parizvino pedyo $ 6 mamiriyoni nokuti kota kutenga kubva digitaalinen zvipo, kubvira wechipiri chikamu 2017)
Tarisa basa iri nekushanyira webhusaiti yepamutemo https://fanchain.com/
Pakazara, hurongwa huchava nemamiriyoni 600 eZVZZ. Pakati peizvi, mamiriyoni makumi maviri nemakumi maviri nemakumi matatu ari kutengeswa Panguva yekutengesa, 1 FANZ yakanga yakaenzana ne055 US $. Unogona kutenga mari yeETH, bitcoins uye bitcoins, uyewo yeKASH. Zvinokosha kucherechedza kuti FanChain mari dziri maererano mureza ERC20, iye anoita mazano ane ERC721 ano. Mari yemari yacho inoenderana nezvose ERC20 wallets. Asi, zvakakosha, iyo deta yakajeka inongoratidzwa chete muhurongwa hwe Fanchain. Iye zvino nzvimbo yacho ine chinyorwa chena, ichave yakazaruka kusvikira musi waSeptember 30.
Chikamu chekutanga-ICO chakabudirira zvakachengetwa kubva munaJune 30 kusvikira munaJuly 30. Mutengo wekiti 1 wakanga wakaenzana ne $ 0.1. Maererano nezvipikirwa zvekutanga, danho guru rekutengesa rakarongwa kubva munaSeptember 1 kusvika kuOctober 1, mutengo weimwe chiratidzo uchave $ 0.25.
💥 Nei zvakakosha kutsigira basa iri:
Sangano reF FanChain, zvachose vashandi varo vari kushanda kuti vabatsire kambani uye vakagadzirira kubatsira mune chero nyaya. Vanogara vachitaurirana uye havaregi kuona. Zvechokwadi, panguva yazvino, patinenge tichitaura nezveIOP projects, ichi chinhu chakakosha zvikuru.
Zvose zvinoratidzwa neboka rekufambisa FanChain zviripo pachena, ikozvino iwe unogona kuzviziva uye unoedza ino.
Vatungamiri veprojekti iyi vane ruzivo rwakakura mukuita bhizimisi rwemhando iyi uye FanChain, zvirokwazvo vachabudirira.
FanChain anobatanidzwa mumhando dzose dzekrispto, mavharamu anovhara, kuita zvibvumirano zvakakomba.
Mushure mekuverenga iyi blog, munogona kunge mune mibvunzo. Iva nechokwadi chekuvabvunza mumasimba makuru emuFanChain:
My username bitcointalk: skillman11